နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (၇၃)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အကြို ဂုဏ်ပြုစုပေါင်း သွေးလှူပွဲမျ?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အသက် (၇၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် NLD လူငယ်များ၊ ဒေသခံသွေးလှူရှင်များစုပေါင်းပြီး လှိုင်သာယာနှင့် အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် တစ်နေကုန် သွေးလှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် အင်းစိန်နှင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်များမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူ ငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ ဦးဆောင်ကာ ပြည်သူတို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အသက် (၇၃)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းနှစ်နေရာခွဲ၍ ဂုဏ်ပြုစုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံ စုပေါင်း သွေးလှူဒါန်းပွဲသို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦး ဖြိုးမင်းသိန်း၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မြင့်တို့သည့် ဇွန် ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရောက်ရှိလာပြီး သွေးလှူဒါန်း နေမှုများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် အင်းစိန်ဆေးရုံမှ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ထွက်ခွာပြီး လှိုင်သာယာပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိကာ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဆန်းလွင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဆေးရုံကြီး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မွေးနေ့ဂုဏ်ပြု သွေးလှူဒါန်းပွဲအား အစီအစဉ် ရှစ်ရပ်ဖြင့်ကျင်းပရာ ဝန်ကြီးချုပ်က အမှာစကားပြောကြားသည်။ ဆက် လက်ပြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင့်ဇော်ထွေးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့သည်။
ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဆန်းလွင်ဦးကလည်း သွေးလှူဒါန်း ရခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများကို ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ယင်းနောက် တက် ရောက်လာသူများက မွေးနေ့ကိတ်တွင် ဖယောင်းတိုင်များ ထွန်းညှိကာ မွေးနေ့သီချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး သွေးလှူရှင်များအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့က ဆေးရုံတွင်း သွေးလှူဒါန်း နေမှုများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဆန်းလွင်ဦးက ”အခု နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင် သွေးပုလင်း ၁၅ဝကျော် ထုတ်ပြီးပြီ၊ ညနေထိဆိုရင်တော့ ၂၅ဝ နဲ့ ၃ဝဝ လောက်တော့ရမယ်မှန်းထားတယ်။ ဒီဆေးရုံမှာ ဒီလို စုပေါင်းသွေးလှူတာ ဒါပထမဆုံး အကြိမ်ပါပဲ၊ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီလူ တွေဆီက မှတ်တမ်းတွေရပြီးလေ၊ သူတို့က လေးလတစ်ကြိမ် လှူလို့ ရပြီ၊ ဒီဆေးရုံရဲ့ သွေးလိုအပ်ချက်က တစ်လကို ၂ဝဝ လောက်ရှိနေတယ်။ ဆေးရုံက ခုတင် ၂ဝဝ ဆေးရုံပါ။ ဒါပေမဲ့ လူနာက အခု လေးအတွင်း ပျမ်းမျှ တစ်လကို ၂၂ဝအောက်မလျော့ဘူး။ လှိုင်သာယာအပြင် တွံတေး၊ ကော့မှူး ထန်းတပင်၊ ညောင်တုန်း အကုန်လာတက်နေကြတာ၊ အခုလိုသွေး လှူတာအင်မတန်ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းပါတယ်။ အစဉ်အလာ ကောင်းတွေလည်း ကျန်ခဲ့ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
လှိုင်သာယာဆေးရုံသို့ လူနာလာကြည့်ရင်း သွေးလှူပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးက ”သမီးလူနာလာကြည့်ရင်းနဲ့ သွေးလှူဖြစ်တာပါ၊ တစ်ခါမှ မလှူဖူး တော့ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ လူတွေကလည်း အများကြီးပဲလေ၊ ပျော်ပြီး တော့ လှူတာ၊ အခုမှ စလှူဖူးတာ ပထမဆုံးအမှတ်တရပါပဲ”ဟု ပြော သည်။ အကြိမ် (၂ဝ)မြောက် သွေးလှူ ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်နေ ဦးမြင့်ဦးက ”အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာတယ်။ အမေစုအတွက် အမှတ်တရပါပဲ။ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ တိုင်းပြည် အကျိုးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ကြက်သွန်နီဈေးနှုန်းများ အဆမတန်မြင့် တက်လာပါက ပြည်ပမှ ယာယီ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်
အရည်အသွေးမြင့် နှမ်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် မကွေးမြို့၌ နှမ်းကုန်ချောထုတ် စက်ရုံကို ငွေကျပ??